Mutungamiriri weGeorgia anotsigira kutangazve kwendege dzakananga pakati peGeorgia neRussia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Mutungamiriri weGeorgia anotsigira kutangazve kwendege dzakananga pakati peGeorgia neRussia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutungamiriri we Georgia, Giorgi Gakharia, akagamuchira chinogoneka chinogoneka muhukama na Rashiya, kureva kutanga kwendege dzakananga pakati penyika mbiri, bazi rezvematongerwo enyika rehurumende yeGeorgia rakaziviswa neChipiri.
"Ndinogamuchira shanduko dzakanaka dzinogona kutungamira mukuvandudzika, kureva kuti, kutangazve kwendege," akadaro Gakharia.
Sekureva kweMutungamiriri weGeorgia, kumisidzana nendege dzakananga kuRussia kunobatsira "kwete kushanya chete, asi zviuru nezviuru zvevaGeorgia vanosangana nematambudziko ekufambisa." Gakharia akasimbisa kuti hupfumi hwenyika hunofanirwa kugadzirirwa zviitiko zvakadaro mune ramangwana uye nekugona kugadzirisa njodzi dzinogona kuitika.
Vhiki rapfuura, Gurukota rinoona nezvekunze kuRussia, Sergey Lavrov akati kutangazve kwendege dzakananga pakati peRussia neGeorgia ndicho chisarudzo chakakodzera.
Musi waJune 20, 2019, zviuru nezviuru zvevaratidziri vakaungana padyo neparamende yenyika mudhorobha reTbilisi, vachida kuti gurukota rezvemukati mutauriri weparamende asiye chigaro. Kuratidzira uku kwakakonzerwa nemheremhere pamusoro pekutora chikamu kwevamiriri veRussia muchikamu che26th cheInter-parliamentary Assembly on Orthodoxy (IAO). Musi waJune 20, IAO Mutungamiri Sergei Gavrilov akavhura musangano muparamende yeGeorgia. Vatongi vemitemo vanopikisa vakatsamwa nekuti Gavrilov akataura kuvatori vechiitiko kubva pachigaro chemutauriri wedare reparamende. Mukuratidzira, havana kubvumira musangano weIAO kuenderera mberi. Nguva pfupi yapfuura nyonganyonga muTbilisi, Mutungamiri weGeorgia, Salome Zurabishvili akapa Russia muvengi uye anogara paFacebook peji rake, asi gare gare akataura kuti hapana chakatyisidzira vashanyi veRussia munyika.
Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akasaina chirevo, chakamisa kurambidzwa kwenguva pfupi kwendege dzevapfuuri kuenda kuGeorgia kubva muna Chikunguru 8. Musi wa22 Chikumi, Bazi Rezvekutakurwa muRussia rakazivisa kuti kutanga musi wa8 Chikunguru, nendege nendege dzeGeorgia dzinoenda kuRussia dzamiswa.